दयाहङ राई र प्रियंका कार्कीको सम्बन्ध अन्त्य भएकै हो त् ? मिष्टर झोलेबाट प्रियंका यसरी बाहिरिन्
Home / समाचार / दयाहङ राई र प्रियंका कार्कीको सम्बन्ध अन्त्य भएकै हो त् ? मिष्टर झोलेबाट प्रियंका यसरी बाहिरिन्
दयाहङ राई र प्रियंका कार्कीको सम्बन्ध अन्त्य भएकै हो त् ? मिष्टर झोलेबाट प्रियंका यसरी बाहिरिन् 0
कुनै समय बारम्बर दोहोरिरहने रिल जोडी हुन् दयाहाङ राई र प्रियंका कार्की । दयाहङ अभिनित प्राय सबै चलचित्रमा नायिका प्रियंका नै हुन थालेपछि धेरैले उनीहरुको रिलेशनबारे अनेक अड्कालबाजीसम्म गरे ।
आफूहरुबीच रिलेशनसीप रहेको हल्ला सम्म चलेको स्वयम् नायिका प्रियंकाले बेलाबखत भन्दै आएकी थिइन् । तर, एकाएक दुई कलाकारबीच फाटो आएर हो या अरु नै कारणले हो ,पछिल्लो चलचित्रहरुमा भने दयाहङ र प्रियंकाको जोडी दुर्लभ बन्दै गएको छ । दयाहङ अरु नै नायिकाहरुसँग फिल्मी रोमान्समा व्यस्त छन् भने उता प्रियंका कार्की रियल ब्वाइफ्रेन्ड आयुष्मान जोशीसँग ।
दयाहाङ राईले ‘मिस्टर झोले’ गर्दा प्रियंकालाई खुब सम्झिएको बताए । उनले भने, ‘‘मिस्टर झोले’को कथा ‘झोले’भन्दा फरक भएका कारण धेरै पुराना कलाकार यसमा अट्न सक्नुभएन । तर, ‘मिस्टर झोले’ गर्दा ‘झोले’का सम्पूर्ण कलाकारलाई मैले धेरै मिस गरेको थिएँ ।’
शास्त्रीय मान्यता अनुसार धन प्राप्तीका लागि यस्ता संकेत शुभ ?
भाउ खोज्ने प्रेमिका बाट दिक्क गायक उद्धब घिमिरे (भिडियो सहित)